शिक्षा / स्वास्थ्य «
सुगर रोग पूर्ण रुपमा निको पार्ने फल पत्ता लाग्यो
पछिल्ला दिनमा मानिसको व्यस्त जीवनशैली र अस्वस्थ्य खानपानका कारण मानिसमा विभिन्न खालका रोगहरु लाग्ने गरेका छन् । यस्ता रोगहरु बढ्नुमा मानिसको विलाशी जीवनशैली व्यायामको कमी आदीका कारणले मानिसमा रोग बढीरहेको छ । जसका कारण मधुमेह, हर्ट अट्याक, किड्नी सम्बन्धी रोगीको संख्या पछिल्ला दिनमा बढीरहेको छ । रागेलागेपछि विभिन्न औषधिहरुको प्रयोग
यस्ता अवस्थाका व्यक्तिले भुलेर पनि नखानुहोस् माछा !
माछामा प्रशस्तै पाइने प्रोटिन र भिटामिन-डी ले हाम्रो मांशपेसीको वृद्धि र विकासमा मद्दत गर्दछ। तथापी, यहि प्रोटिन अधिक हुँदा शरिरको लागि हानिकारक हुन सक्छ। माछामा हामीलाई अत्यावश्यक पर्ने पौष्टिक तत्वहरूका साथसाथै हानिकारक गह्रौँ धातु पारो (Mercury) पनि पाइन्छ। जुन गर्भवती महिला र नवजात शिशुहरूको लागि एकदमै हानिकारक हुने गर्दछ। कस्ता
पढ्नुहोस्, नरिवलको एक टुक्राको फाइदा
लण्डनबाट पीएचडी गरेकी भारत भोपालकी डा. गिताञ्जली शर्माले नरिवलको उपयोगिताबारे नयाँ तथ्य सार्वजनिक गरेकी छिन् । डाक्टर शर्माका अनुसार नरिवल भिटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो । गर्मीमा यसले शरिरलाई शितलता प्रदान गर्छ । काँचो नरिवलमा पानीको मात्रा पनि हुन्छ त्यसकारण शरिरलाई हाइड्रेट गर्दछ । यसले कपाल र
ल थाहा पाउनुहोस्, काँचो केराका फाइदा
तपाइँ हामीलाई थाहा नहुन सक्छ काँचो केरा पाकेको केराभन्दा पनि फाइदाजनक हुन्छ । युनिभर्सिटी अफ कोलोराडो हेल्थ साइन्स सेन्टरले गरेको अनुसन्धान अनुसार यसमा प्रोटोपेक्टिन कम्पाउन्ड हुन्छ । यसको स्टार्चलाई डाइजेस्टिभ फाइबरमा परिवर्तन गर्ने गर्दछ । यसले पेट सफा राख्छ र तौल पनि कम गर्न मद्दत गर्छ । पाकेको केराको फाइदाबारे
किन खस्छ आङ? जान्नुस यसका लक्षण
पाठेघर, पिसाब थैली, आदिजस्ता महिला अंग सामान्य अवस्थादेखि आफ्नो ठाउँहुदै योनीमा झर्नुलाई आङ झर्नु या आङ खस्नु भनिन्छ । चिकित्साशास्त्रको अनुसार आङ खस्नुको मुख्य कारण सानोपेट भित्र हुने मांसपेसी कमजोर भएर खुकुलो हुदै जानुले हो । आङ आखिर किन खस्छ यसका कारण जानिराखौं १. सानो उमेरमा बिबाह गर्नु अनि बच्चा
एक चिम्टी नुनले तपाईको भाग्य बदल्न सक्छ…भिडियो
नुन यस्तो पदार्थ हो जसको प्रयोगले खानेकुराको स्वाद मात्र बढाउँदैन कि तपाईको जीवनमा चलिरहेको विविध समस्या हटाउन पनि नाटकीय तवरले मद्दत गर्दछ । वास्तु शास्त्र अनुसार नुनको प्रयोगले असाध्यै मुश्किल समस्या पनि समाधान गर्न सकिन्छ । अहिले धेरै विश्वभरकै मानिसहरू व्यापार र जागिरको समस्याले पिरोलीरहेका छन् । जत्ति मेहनत गरे
म:म खाँदै हुनुहुन्छ ? साबधान ! यस्तो खतरा रोग लाग्न सक्छ !
अहिले नेपालीहरु जुन सुकै होटल रेष्टुरेन्ट वा कही कतै खाजाको अर्डर गरुन तिनिहरुको पहिलो रोजाई हुन्छ म:म। किनकी हिजोआज हरेक गाउँदेखि सहरका गल्लीमा सहजै उपलब्ध हुने गर्छ । उक्त मःम बनाउन मैदाको प्रयोग गरिन्छ । मैदाबाट बनेको मःम दैनिक खानु शरीरका लागि खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ
मुख,जिब्रो र ओठमा खटिरा आयो ? अब एकछिनमै गायब हुन्छ यसो गर्नुहोस (भिडियो हेर्नुहोस)
मुख, ओठ र जिब्रोमा खटिरा आयो ? अब यसो गर्नुहोस एकछिनमै गायब हुन्छ के तपाईको मुखमा साना-साना बिबिरा, फोका-फोकी आएर निकै सताएको छ ? मुखभित्र, जिब्रो, गिजा, ओठ लगायत मुखको कुना-कानी र कहिलेकाहीँ गालाको छेउसम्म पनि घाउ भएकाे छ ? यस्ता घाउ खटिराकाे समस्या बढेर जटिल समस्या पनि अाउन सक्छ
महिलालाई किन थाहा हुँदैन हार्टअट्याक ? पुरुषकोभन्दा महिलाको मृत्यु हुने सम्भावना बढी
महिलालाई हृदयघातको लक्षण थाहा नपाउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनकाअनुसार ५५ वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले कहिलेकाही हृदयाघातको लक्षण थाहा पाउँदैनन् । यसैगरी, हृदयाघात भएर अस्पताल भर्नामा भएकामध्ये पुरुषकोभन्दा महिलाको मृत्यु हुने सम्भावना बढी भएको पनि देखिएको छ। हृदयाघात भएर अस्पताल भर्ना भएकामध्ये आधाभन्दा बढीले पहिले मुटुसम्बन्धी लक्षण महसुस
यसकारण झर्छ कपाल : पढ्नुहोस र सेयर गर्नुहोस
कतिपयको कपाल वंशानुगत गुणका कारणले झर्छ । तर, अधिकांश मानिसको कपाल भने तनाव र स्ट्रेसका कारण झर्ने गरेको हुन्छ ।भिटामिन ए, बी, सी, डी, ई, बी कम्प्लेक्स, आयोडिन, म्याग्नेसियम, कपर, आइरन, फस्फोरस, सिलिकन र पोटासियमको कमी हुँदा पनि कपालमा असर पुग्छ ।कतिपयले अत्यधिक मात्रामा कपाल हाइलाइट र कलरिङ गरिरहेका हुन्छन् । यसो गर्दा पनि
ज्ञानेन्द्र शाहीको अवस्था चिन्ताजनक, हतारहतार इमर्जेन्सीमा भर्ना गरियो…(हेर्नुहोस् भिडियो)
“नेपालका लागि नेपाली” अभियानका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही माथि कुटपिट भएको छ । कुटपिट हुदै गर्उदा
चितवनमा ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि निर्घात कुटपिट,अवस्था गम्भीर…(हेर्नुहोस् भिडियो)
चितवनको भरतपुरमा भ्रष्टचार विरोधी अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही कुटिएका छन् । आज दिउँसो भरतपुरको चौविसकोठीमा आयोजित
भारतिय चर्चित र्‍यापर वन्ताईले आज काठमाडौं तताउने
भारतिय चर्चित र्‍यापर इमिवे बन्ताईले काठमाडौं तताउने भएका छन् । अल्फा इन्टरटेन्मेन्ट एण्ड इभेन्ट्सको आयोजनामा
अशोक दर्जी र टंक बुढाथोकीले ३ करोड नेपालीलाई रुवाए